सीमा विवादबारे सांसदबीच नै चर्काचर्की, कसले के भने ? – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
सीमा विवादबारे सांसदबीच नै चर्काचर्की, कसले के भने ?
अर्थ राजनीतिप्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७६, शुक्रबार
काठमाडौं । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सीमा समस्याबारे छलफल हुँदै थियो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भीम रावल र समाजवादी पार्टीकी सरिताकुमारी गिरीबीच सीमा समस्या बहसबारे देशभित्र र देश बाहिर उठेका प्रसंगलाई लिएर केहीबेर चर्काचर्की पर्यो ।
सरिता गिरी : वि.सं. १८१६ को सुगौली सन्धी १९५० को सन्धीले यसअघिको सन्धी खारेज भयो भनेको छ ।
ब्रिटिशले भारत छोडेको बेला नेपालको नक्सा कस्तो थियो त्यो हेर्नुपर्छ, सन् १९६२ मा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि २००६ मा टोनी हेगेन फाउण्डेशनबाट नेपालको नक्सा निकालेका छन् । त्यसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छैन ।
१९६२ मा भारतले नक्सा जारी गरेको थियो, त्यतिबेला नेपालले भारतलाई कुनै प्रश्न गरेको छ ? १९६३ मा अगाडिको किताबमा लिपुलेक नक्सामा छैन । त्यो बेलामा राजा महेन्द्रको सरकारले भारत सरकारलाई सुसुचित गराएको छ कि छैन ?
नेपालले भारतको सीमा मिचेको कुरा पनि आइरहेको छ । दुई देशबीच सीमा विवाद हुनु अनौठो हैन । यो कुरा आश्चर्यजनक कुरा हैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरालाई इमोसनल रुपमा उठाउँदा कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर हुन्छ ।
भीम रावल : नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेको कुरा आन्तरिक खपतका लागि उठाइएको भन्ने एकदमै गलत हो । यो भारतीय पक्षको हात बलियो पार्ने तर्क हो । हामीले आफ्नो भूभाग अतिक्रमणका परेको कुरा उठाउँदा आन्तरिक खपतका लागि उठायो भन्ने ? यो गलत कुरा हो ।
सरिता गिरी : म माथि आरोप लगाइयो, भारतलाई सपोर्ट गर्ने कुरा गर्यो भनेर । म सत्यको कुरा गरिरहेको छु र मेरो अधिकार छ भन्नका लागि, कि यहाँका माननीय सदस्यज्यू चाइनाको पक्षमा बोलिरहनुभएको छ ? कसैको राष्ट्रियताको बारेमा यस्तो आपत्ति गर्नुहुन्छ ? सबैले आ–आफ्नो मर्यादा/सीमा राखेर कुरा गरौं ।
सभापति पवित्रा निरौला खरेल : माननीयज्यू चीन भारतको भन्दा पनि आफ्नो देशको पक्षमा कुरा गरिरहेका छौं ।
सरिता गिरी : यो अन्तर्राष्ट्रिय समिति हो सभापतिज्यू, यसमा सबैको कुरा हुन्छ ।
सभापति खरेल : यहाँ भारत र चाइना पक्ष र विपक्षमा होइन आफ्नो देशको सीमा रक्षाको कुरा गरिरहेका छौं ।
सरिता गिरी : सभापतिज्यू, यहाँले रुलिङ गरिदिनुभएको भए मैले यति बोल्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।
भीम रावल– नेपालको सीमा सुरक्षाको विषय आन्तरिक खपतको लागि मात्र हो भनेर भारतको पूर्व राजदुतले भन्ने र त्यही कुरा यहाँ कसैले भन्छ भने त्यो भारतीय पक्षलाई बलियो बनाउने कुरा हो भनेको हुँ । यो कसैको मर्यादाको कुरा होइन ।
दोहोर्‍याएर भन्छु, यो नेपालको वार्तालाई कमजोर बनाउने कुरा हो । सीमा समस्या आन्तरिक खपतको कुरा होइन । यस विषयमा मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन, तथ्यले देखाउँछ ।
सरिता गिरी : माननीयज्यू, राष्ट्रिय हितको आ–आफ्नो परिभाषा हुन्छ ।
अग्नि सापकोटा : सीमा समस्या आन्तरिक खपतका लागि उठाएको भनेर संगीन आरोप लगाएको कुरा मैले पनि उठाएको थिएँ । यसको कुनै गम्भीर खालको खण्डन नै भएको छैन । नेपालले खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो धारणा हो ।
आउन त अस्तिनै आयो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सल्लाह गरेर नै भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्‍या भनेर । भारतले त हामी बीचमा फाटो पार्न लाख कोसिस गर्छ । विवाद पार्नका लागि कोसिस गरिरहेको छ ।
बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीलाई बहुमत, ब्रेक्जिट सम्झौतालाई जनताको अनुमोदन
माधव नेपाल र फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयका एसिया तथा ओसिआन डिभिजन प्रमुखबीच भेटवार्ता
प्रचण्डको आग्रह- ओली जी , राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुस्
खोप खरिदको अनियमिततामा सरकारलाई दोष : प्रधानमन्त्री ओली
देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न हस्ताक्षर पुग्यो , राष्ट्रपति समक्ष मागदावी प्रस्तुत गरिने
माधव समूहले कायरता प्रदर्शन गरे : डा. भट्टराई
प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न सक्रिय हुने माओवादी केन्द्रको निर्णय
नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा नदिने तर संसदमा अनुपस्थित हुने
एमाले प्रमुख सचेतक भन्छन्, ह्वीप उल्लंघन धेरै सिरियस कुरा